သိုးမည်း – ဖတ်ပြီးရင် မရယ်မိစေနဲ့နော် | PoemsCorner
သိုးမည်း – ဖတ်ပြီးရင် မရယ်မိစေနဲ့နော်
တခါက လူနှစ်ယောက်ဟာတောထဲမှာမျက်စိလည်လမ်းမှားပြီးလမ်းပျောက်နေပါတယ်။ဒါကို သစ်ခုတ်သမားတစ်ယောက်ကကယ်ပြီး အိမ်ကိုခေါ်လာတယ်။ညရောက်တော့ အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက် က သစ်ခုတ်သမားရဲ့သမီးကို——-တယ်။ဒါနဲ့ သစ်ခုတ်သမားလည်းအလွန်စိတ်ဆိုးပြီးသတ်မယ်လုပ်ပါရော။အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်လည်း
သစ်ခုတ်သမားကိုမသတ်ဖို့ဒူးထောက်တောင်းပန်တာပေါ့။ဒါနဲ့ သစ်ခုတ်သမားလည်းအခွင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ခြံထဲမှာရှိတဲ့ သစ်သီး၁၀လုံးစီ ခူးခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။မကြာခင်မှာ ပထမလူက မက်မန်းသီး၁၀လုံးကိုယူပြီးပြန်လာပါတယ်၊သစ်ခုတ်သမားက အဲ့ဒီမက်မန်းသီးကို မင်းရဲ့ ဖင်ပေါက်ထဲကိုထည့်ရမယ်၊တကယ်လို့ ၁၀လုံးလုံးထဲ့ပြီးတာတောင်တစ်ချက်မျှမရယ်ရင် အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်တဲ့၊ဒါနဲ့ ပထမလူလည်းထဲ့နေတာ ၉လုံးမြောက်လည်းရောက်ရော အားပါးတရရယ်လိုက်လို့ သတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ယမမင်းဆီကိုရောက်တော့ ယမမင်းက “မင်းကွာ ၊နောက်နှစ်လုံးသည်းခံလိုက်ရင် မင်းသေစရာမလိုတော့ဘူး၊ဘာကြောင့်ရယ်ရတာလဲ”လို့မေးတော့ ပထမလူက အရယ်ကိုမရပ်နိုင်သေးဘဲ “ယမမင်းကြီး ၊ကျတော်မျိုး မရယ်ဘဲနဲ့၁၀လုံးလုံးထဲ့နိုင်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့် ၉လုံးမြောက်မှာ ကျနော့သူငယ်ချင်းက ဒူးရင်းသီး၁၀လုံးကို သယ်လာတာတွေ့လိုက်ရလို့ ပါ။”တဲ့
အရာရှိ-‘ Ready’, ‘Aim’
ကိုအူ လည်း ကျန်လူများ ကို အတုယူ၍ အော်လိုက် ပုံ က “Fire
မနီ။ ။“ဂျီးဆပ် ခရစ်”(လန့်သွားပြန် သဖြင့် ရောင်၍ ထအော်ပြန်သည်၊ ထို့နောက် တဖန်အိပ်ပျော် ပြန်လေသည် )
မိန်းမ။ ။ဆရာကဘာပြောလို့ လည်း ၊ရှင်ကစိတ်ဆင်းရဲရအောင်။
ယောင်္ကျား။ ။မင်းကိုယ်ဝန်ရှိတုန်းကဗေဒင်ဆရာပြောလိုက်တာလေ ၊
မိန်းမ။ ။အငိးမှတ်မိသားပဲ။ ကလေးကဖေဖေလို့ ခေါ်တဲ့
နေ့ ကြရင် ကလေးအဖေသေမယ်ဆိုတာမှတ်လား။
ယောင်္ကျား။ ။အေးလေ။မနက်ကပဲသားလေးကငါကို ဖေဖေ လို့ခေါ်တယ်လေ။
အခုည ( ၁၂ )နာရီကျော်ပြီလေ။ငါသေမှမသေသေးတာကွ။
မိန်းမ။ ။သူပြောတာမမှားပါဘူးမောင်ရယ်။ နေ့ ခင်းက အကိုအလုပ်သွား
နေတုန်း ဟိုဘက်အိမ်က ကိုဖိုးအောင်ကြီးဆုံးသွားတယ်လေ။
ဆရာပေါက်စ ၂ ယောက် က ခွက် ပုံး ကစ် ရင်း စစ် နေ ကြခြင်းဖြစ် သည်…
စစ် တဲ့ ပုံ စံ က တော့… ကြွတ်ကြွတ် အိပ်လေး တခု စီထဲ မှာ. လူ့ ကိုယ် တွင်း မှာ ရှိတဲ့.. အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်း တ ခု စီထည့် ထား သည်… ပြီး တော့.
ကျေားင်းသူလေး တ ယောက် အလှည့် ကြတော့….
ကျွတ်ကျွတ် အိပ်ကို စမ်း ကြည့်ပြီး…
“သမီး ဒါ စာမေး ပွဲစစ် တာ လေ…သေချာစဉ်းစား သမီး… “
“သမီး မှာ chance ရှိ တယ် စဉ်းစား လို့ ရသေးတယ် “… လို့ ပြောပါတယ်..
အဲဒီမှာ.. ကျောင်းသူ လေး က…
“မ.. မဟုတ်ဘူး.. ဒါ ၀က်အူချောင်း မှ ၀က် အူချောင်း အစစ်..” လို့.. ပြောပါတယ်.
“မဟုတ်သေးဘူးလေ သမီး… ဒါလူ့ ကိုယ် အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်း တွေ.. လေ”
“ဘယ်လို လုပ် ၀က် အူချောင်း ပါမှာလည်း… သေသေ ချာချာစဉ်းစား သမီး”
“ပြီးတော့ သမီးက ဆရာဝန်လုပ်မှာလေ.. မရှက် ရဘူး…” လို့ ပြော သတဲ့..
“ကဲ ဒါဆို ဖွင့် ကြည့် ကြရအောင်” ဆို ပြီး ဖွင့် ကြည့်လိုက် တဲ့ အခါ…
တ ကယ် ပဲ.. ၀က် အူ ချောင်း ကြီး ထွက်လာ သတဲ့…..
“ဟာ .. ခွီး တဲ့ မှ ပဲ… ငါ တို့.. ၀က် အူ ချောင်း နဲ့ မှား မြည်း မိပြီ”…တဲ့…
ရယ်မိရင်မုန့်ကြွေးရမယ် . .
ညီနေမင်း website မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
In: Others Posted By: Ye Htwe Date: Jan 26, 2011
နင် မ ပေး နိုင် သော ၁၅၀၀
ဒီစစ်ပွဲပြီးရင် ကျောင်း…တက်…ချင်…တယ် (မင်းခိုက်စိုးစန်)
က လေးအ တွေး
Leave comment2Comments & 432 views
ma yee be ko lone wa ma nay naing bu,,,a hote
By: ei lay at Feb 2, 2012
By: ei lay at Nov 1, 2012